ကိုငယ် နဲ့ မေလေး
နှစ်တနှစ်ရဲ့ ဇွန်လကုန်ခါနီး တစ်ရက်မှာ
ရတဲ့ လခနဲ့ ကုန်တဲ့ အသုံးစရိတ် မကာမိမှာစိုးလို့
ချခဲ့တဲ့ သက်ပြင်းလေးတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
တိုင်ပတ်ဖို့ ဘိုင်ပြတ်လို့ ခေါင်းစားခဲ့ရဖူးတယ်။
ပုဆိုးအဟောင်းကို သုံးထည်စာ အသစ်စရိတ်နဲ့ သူ့ဆီ အရောက်ပို့ပေးခဲ့ရဖူးတယ်။
၅ ဘတ်ဖိုး မှိုသုံးလုံးလည်း မအူမလည် ၀ယ်ခဲ့ရဖူးတယ်။
ဆမ်ယမ် ဆစ်ဘတ် ဟင်းရွက်စုံလည်း ချက်စားခဲ့ဖူးတယ်။
seven-eleven ၀င်ထွက်တိုင်း ခုန်တတ်တဲ့ ရင်အစုံရှိတယ်တဲ့။
ဒူးရင်းသီးတွေ အစားများခဲ့တဲ့ အမေကြောင့် အပူကန်ပြီး မွေးဖွားလာတဲ့
ငိုကြွေးတတ်တဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက် စ ရောက်လာခဲ့တယ်။
မိဘတာဝန်ဆိုတာ သည်းခံခြင်း၊ ပေးဆပ်ခြင်း၊ အနစ်နာခံခြင်း၊ စိတ်ရှည်ရခြင်းဆိုတဲ့ လက်တွေ့သင်ခန်းစာ တွေအတွက်ပေ့ါ။
မိသားစုဆိုတာ ပီပြင်စေဖို့ နောက်တိုးလေးတွေက အင်အားထပ်ဖြည့်ပြန်တယ်။
ပင်ပန်းလည်း မျှခံ၊ အဲဒါ မိသားစု စိတ်ဓာတ်လေ။
ဆူပူအော်ဟစ် ရန်ဖြစ်သံတွေလည်း ညံခဲ့ဖူးရဲ့။
ရယ်မောပျော်ရွှင် သီချင်းသံတွေလည်း စီခဲ့ဖူးရဲ့။
နွေးထွေးတဲ့ အချစ်တွေ ရှိတယ်။
ထွေးပွေ့ပိုက်ပေးတဲ့ လက်တစ်စုံ ရှိနေတယ်။
မောလာတဲ့အခါ မှီခိုစရာ ပုခုံးတစ်စုံ ရှိတယ်။
မေ့ရဲ့ ချစ်သူ ရှိတယ်။
မမြင်ရတဲ့ ကြိုးလေးတွေ ရှိနေတဲ့....
ကျမတို့ရဲ့ ......ဘယ်အရာနဲ့မှ အစားမထိုးနိုင်တဲ့ အိမ်လေး
တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ် ရှိခဲ့ပြီလေ။ ။
Posted by tg.nwai at 3:55:00 AM
Lables, ကဗျာ၊, ကဗျာ၊ (ကိုယ်ပိုင်)
I feel your heartbeat with same rhythm,
I feel your feeling with same harmony,
I feel your open mind with same open mind,
I feel safe and sound with your word,
I feel more comfort and stable with your expression,
Most of all I feel your love with this post.
Thanks for encourage, support, stay with me together, share with me your thought and your love.
Your beloved Ko Nge @ Mg Gyi @ Kyaw Nge